बुढी आमा भन्छिन् छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर बा’च्नु नै बे’कार जस्तो लाग्यो ! – Life Nepali
बुढी आमा भन्छिन् छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर बा’च्नु नै बे’कार जस्तो लाग्यो !
छोरा-बुहारी आफ्नो बेडरूममा कुरा गरिरहेका थिए, ढोका खुल्लै भएको का’रण उनीहरुको कुरा बाहिर कोठामा बसिरहेकी बुढी आमाले पनि सुनिरहेकी थिईन । छोरा- हामी आफ्नो जागीरको का’रणले गर्दा आमाको ध्यान राख्न सक्दैनौं, त्यसैले उहाँलाई बृद्धाआश्रम भर्ती गराईदिउँ “त्यहाँ उनको हेरचाह पनि हुन्छ र हामी पनि कहिलेकहिँ भेट्न जाँदै गरौंला । छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर आ’माको आँ’खाबाट आँ’सु नि’स्किए । बुहारी- पैसा कमाउनको लागि त पूरा जिन्दगी छ हजुर, तर आमाको आशिर्वाद जति पनि मिलोस् त्यो कम हुन्छ “उहाँलाई पैसाभन्दा धेरै हाम्रो साथको जरुरत छ ।
यदि मैले जब गरिन भने पनि धेरै नोक्सान नहोला, म आमासँगै बस्छु, बरु घरमै ब’च्चाहरूलाई ट्युशन पढाउँछु, जसकारण आमाको हेरचाह पनि हुनेछ । याद गर्नुस्, बचपनमै तपाइँको बुवा बि’त्नुभयो, तपाइँकी आमाले निक्कै दु’ख क’ष्ट सहेर तपाइँको पालनपोषण गर्नुभयो, तपाइँलाई पढाउनु भयो लेखाउनु भयो, यत्तिको सक्षम बनाउनु भयो ।त्यतिबेला उहाँले तपाइँलाई कहिल्यै छिमेकीको भरोसामा छोड्नु भएन, का’रण: तपाइँको हेरचाह उहाँ बाहेक अरु कसैले राम्रोसँग गर्न सक्दैन्थ्यो ।
र आज त्यही आमालाई तपाइँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ?? तपाइँ जेसुकै भन्नुस्, तर आमा हाम्रो साथमै रहनुहुनेछ, सधैं, अन्तिम क्षण सम्म ।बुहारीको कुरा सुनेर आमा रु’न थाल्छिन, र रुँ’दै पुजा कोठामा पुग्छिन, ईश्वरको अगाडि उभिएर आमा उनको आभार व्यक्त गर्दै भन्छिन- भगवान, तपाइँले मलाई छोरी दिनु भएन, यसकारण धेरैपटक मैले तपाइँको अपमान गरेकी थिएँ, तर.. आज यस्तो लक्ष्मी मेरो घरमा दिनुभयो “तपाइँको आभार कसरी प्रकट गरुँ ? लक्ष्मि जस्ती बुहारी पाएर मेरो जिन्दगी सफल भयो भगवान, धेरै धेरै धन्यवाद तपाइँलाई ।फाइल तस्बिर
Previous बधाई : सारा नेपाली ले चकीत पार्ने काम गरे, एक असल प्रहरी जवानले !सम्मान स्वरुप लाइक शेयर गरौ!
Next २१ बर्षिय महिला हरायको अत्तेंत जरुरि सूचना !खोजिकार्यमा सेयर गरेर सहयोग गरौ !